DHAGEYSO:- Gudoomiyaha Al-shabaab oo markii ugu horeeysay hadalo digniin ah jeediyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO:- Gudoomiyaha Al-shabaab oo markii ugu horeeysay hadalo digniin ah jeediyay
Gudoomiyaha Xarakadda Al-shabaab Sheekh Abuu Cubeyda islamarkaana loo yaqaano Axmed Cumar ayaa markii ugu horeeysay tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya.
Waxyaabaha uu Abuu Cubeyda ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa doorashooyinka sanadkaan ka dhacaaya Soomaaliya, ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya iyo dowlado uu sheegay inay boob ku hayaan kheyraadka dalka.
Abuu Cubeyda ayaa ugu baaqay dadka shacabka ah in aysan ka qeyb galin doorashooyinka dalka ka dhacaaya oo uu tilmaamay inay wataan dad dano gaar ah Soomaaliya ka leh.
Wuxuu sidoo kale eedeyn culus u jeediyay dowladda Turkiga oo uu xusay inay Soomaaliya ka wado qorshe dhul boob ah, waa sida uu hadalka u dhigayee gudoomiyaha Al-shabaab Abuu Cubeyda.
Ugu dambeyntii, Abuu Cubeyda ayaa digniin u diray dalalka dariska la ah Soomaaliya iyo beesha caalamka, isagoo uga digay inay ku dhiiradaan inay dalka Soomaaliya ka sameystaan wixii ay rabaan, wuxuuna carabka ku adkeeyay inay fashilin doonaan waxkasto oo ay Soomaaliya la damacsan yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray gudoomiyaha sare ee Xarakada Al-shabaab ayaa ah kii ugu horeeyay tan iyo bishii September ee 2015, markaas oo ahayd waqtigii loo magacaabay xilka kadib markii gudoomiyihii hore ee Al-shabaab ay dileen ciidanka Mareykanka.